Qeybo ka mid ah jidka Maka Al-Mukarama oo la xiray iyo Meydka xildhibaan Madeer oo saaka la aasayo
Ciidamada dowlada Somalia oo isugu jira nabad sugid iyo Boolis gacan ka helaya kuwa AMISOM ayaa saaka hakad geliyey isu socodka qeybo ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama oo ka mid ah jidadka ugu mashquulka badan Muqdisho.
Guud ahaan socodka gaadiidka dadweynaha noocyadiisa kala duwan ayey saaka ciidamada dowladu ka joojiyeen inta u dhexeysa isgoysyada Banaadir illaa Dabka ee jidka Maka Mukarama, iyadoo dadka cagtooda maalaya loo ogol yahay iney maraan wadada.
Dhinaca kale, Meydka xildhibaan marxuum Shiikh Aadan Maxamed Madeer ayaa lagu wadaa saaka in aas Qaran loogu sameeyo magaalada Muqdisho, iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in xirnaanshaha qeybo ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama uu la xiriiro aaska xildhibaanka.
Xildhibaan marxuum Shiikh Aadan Maxamed Madeer ayaa waxaa shalay duhurnimadii toogasho ku dilay kooxo bastoolado ku hubeysan xili uu soomanaa wax yar ka dib markii uu ka soo baxay masaajidka Marwaas ee degmada Xamar Weyne halkaasoo uu ku soo tukaday salaadii Jimcaha.
Dilka xildhibaan Madeer oo ay masuuliyadiisa sheegatay Al-shabaab ayaa waxaa si kulul u cambareeyey madaxda dowlada Somalia, iyagoo sheegay in xildhibaan Madeer uu ahaa qof ka baxay Qaranka, dilkiisana uusan keeni doonin in la joojiyo horumarka ay ku talaabsaneyso dowlada.
Shiikh Aadan Maxamed Madeer oo ka soo jeeda beelaha dega gobolada Bay iyo Bakool ayaa ahaa gudoomiyihii guddiga Maaliyada ee baarlamanka Somalia, isagoo xilal wasiir oo kala duwan ka soo qabtay dowladihii KMG ahaa ee dalka soo maray oo ay ugu dambeysay tii uu raisul wasaaraha ka ahaa C/wali Maxamed Cali Gaas.